Otu esi eji aka aka ha mechie mmiri n'ime ụlọ: atụmatụ ahụ, ntinye ngwaọrụ - Akụrụngwa - 2020
Ọgwụgwụ nke afọ iri abụọ nke narị afọ nke XXI na-atụ aro na ụlọ obibi nke oge a, gụnyere ụlọ, latrine dị ka nkà na ụzụ karịa obere ụlọ ndozi nke dị na njedebe nke saịtị ahụ. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, usoro ntanetị dị ukwuu maka ụlọ ndị obodo na ihe onwunwe maka ha aghọwo. Ma ihe a niile bụ ọnụ ọnụ ma mee maka ọkachamara n'ụlọ mgbe ị na-etinye aka.
Ụdị usoro ntanetị
Septic ụlọ abụọ
Ntughari tankị na ntinye
Septic tank na biofilter
Akuku tankị na ọdụ ụgbọ mmiri
Otu esi eji aka aka ichikota mmiri
Na-ekesa ọkpọkọ na ihe ọkụkụ
Ntinye na ntinye nke riser
Mkpụrụ akpụkpọ ụkwụ na ihe mgbochi
Ntughari nke Septic
Vidio: ịhọrọ tankụ asa maka ụlọ nke onwe
Atụmatụ nsị ụgbọ mmiri
Usoro ọ bụla maka iwepụ na mkpofu ihe mkpofu n'ime ụlọ obibi, ma ọ bụ obere, chọrọ ịmepụta atụmatụ nke ga-egosi nha usoro ahụ na ọnụ ọgụgụ ma nyere aka n'ịhọrọ:
ụdị ụlọ ọcha na ntinye ya, tinyere ndị ọzọ na-ebute mmiri mmiri, dịka ọmụmaatụ, ịsa ahụ;
ụzọ nhazi ụzọ ntanetị;
ebe obibi nke ụlọ ahụ na-apụ apụ;
na-agafe eriri mmiri n'èzí ụlọ ahụ;
ụdị ngwá ọrụ na ọnọdụ ya n'ime saịtị ahụ;
dị mkpa iji mepụta usoro ihe.
Ihe osise ahụ na-egosipụtakwa ihe ndị na-eme ka ọkpụkpọ ọkụ ahụ, nhọrọ ha na njikọta ha na ozi ndị ọzọ dị mkpa maka ibikọta ihe dị n'ime na mpụga nke usoro ntanetị.
Ndị na-ewu ewu na-ewu ewu taa na-adabere na iji:
akwa tank abụọ;
mmiri tankị na ntanetị;
septic tanks na biofilter;
akwa tank na ikuku na-amanye.
Ị ma? Dị ka ndị ọkà mmụta ihe ochie guzobere, nke mbụ n'ime usoro ụwa nke usoro mmiri ozuzo, nke pụtara na Mesopotemia, ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ ise. Otú ọ dị, usoro ntanetị, nke dị ugbu a, pụtara na Rom oge ochie na narị afọ nke isii BC.
Ụzọ nkwọcha mmiri nke a nwalere site n'ọtụtụ narị afọ dị mfe na ọnụ ala. Maka ịmepụta cesspool n'ụdị olulu mmiri na-enweghị ike, mgbanaka ígwè, brik na ihe yiri ya dị mkpa. Ebe ọ bụ na ala nke olulu a bụ ala ala, mmiri ụlọ mmiri na-agafe na ya, na-abanye n'ime ya wee malite ịsacha ya. A na-etinye ihe ndị ọzọ siri ike nke ihe mkpofu ndị a na olulu ma na-adọta. Mgbe enwere otutu n'ime ha na mmiri ahụ, a chọrọ nhicha.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ banyere otu esi etinye mmiri na-ekpuchi mmiri, tankị septic, usoro ikuku oyi, nakwa otu esi esi mee mmiri.
Usoro a na-arụ ọrụ nke ọma ma na-eme ka ịdị adị ya, ma ọ bụrụ na ụbọchị nsị nke ụlọ anaghị eru mita cubic. Nke a na-enye ohere microorganisms n'ime ala iji merie nhazi nke ihe ndị dị n'ime ala ma si otú ahụ mee ka mmiri dị ọcha site n'ime ala ahụ.
Mgbe olu a gafere, mmiri anaghịzi enwe oge iji dị ọcha wee malite imetọ mmiri mmiri. Ọ bara uru ịmepụta cesspool, ọ bụrụ na mmadụ ole na ole na-eleta dacha na ngwụsị izu. N'ọnọdụ ọ bụla, ụdị oge a nke usoro mmiri ozuzo taa na-aghọ nke na-abaghị uru ma ọ bụ na-adịchaghị ewu ewu na ndị nwe obodo.
Edobere na nso ụlọ maka ịnweta ihe mkpofu ahihia nwere ike ịbụ plastik, brik, ihe, metal, nyere na e mechiri akpa a.
O nwere ike ịbụ na ị ga-enwe mmasị n'ịgụ banyere otu esi họrọ otu mmiri ọkụ, jigsaw, hụrụ, chainsaw, onye na-emepụta osisi, ọkụ ọkụ ọkụ na-ere ọkụ ogologo oge, ịkụnye ọdụ ụgbọ mmiri, ịkwanye ala, ịkụnye na nfe fecal maka ụlọ gị.
Nke a bụ eziokwu maka ala, ebe oke mmiri dị elu. Mmiri mmiri na-ekpuchi ya ga-echebe ala na mmiri ala site na mmetọ. Nanị ihe mgbagwoju anya nke usoro ihe a bụ ịdabere na oku ndị na-akpọkarị mkpọmkpọ ego, n'ihi na ụgwọ ọrụ ya dị elu.
Ngwaọrụ a nwere tankị abụọ, bụ nke nwere ihe dị elu nke elu ya, nke abụọ anaghịkwa edozi ya, nke a na-ejikọta ya na ájá ájá ájá.
Ị ma? Leonardo da Vinci maara ihe zuru ezu na 1516 ọbụna wee nwee ụlọ mposi na-ekpo ọkụ. Ma obuna eze French enweghi ike ime ka echiche nke ndu a gbanwee ndu, n'ihi na n'oge ahu enweghi mmiri ma obu mkpofu mmiri.
Mmiri ahụ na-asọba n'ime mmiri mbụ, ihe ndị siri ike na-emetụta ebe ahụ, ihe ndị dị n'arịa na-ebili n'elu, mmiri dị ọcha dịkwa n'etiti.
A na-ejikọta mpịakọta abụọ ahụ site na ọkpọkọ nke nwere ntakịrị ihe na-echere ụgbọ mmiri nke abụọ. Dịka ya si kwuo, mmiri dị ọcha nke dị ugbu a na-abanye na tank nke abụọ. N'ebe ahụ, ọ na-agafe, na-agafe na ájá ájá, nakwa site na ala, na-ehichasịkwa. O doro anya na na nke mbụ, nke bụ tankị septic, ọtụtụ mkpofu na-agbakwụnye nke nta nke nta, iji kpochapụ ihe ọ dị mkpa iji nweta ọrụ ụgbọ oloko.
Ma a na-atụ aro ka ịkwadebe tankị nke abụọ naanị mgbe si na ala ya jupụta na ngwakọta nke ájá na ájá ka mmiri dị ala ga-enwe ọ dịkarịa ala mita mita. Ọzọkwa, a chọrọ ka a gbanwee nchịkọta ájá ájá a ka a gbanwee kwa afọ ise.
Ọ nwere olulu, nkewawara n'ọtụtụ ngalaba, jikọtara ibe ya site na bọmbụ dị mma. Dị ka usoro, a na-arụ tank dị otú ahụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
A na-eji tank mbụ mee ihe maka mkpofu sludge. Site na ya na-akọwa mmiri ka ọ na-asọba n'ime ogige ọzọ nke tank. Na nje bacteria anaerobic, decomposing organic elements, mee ka mmiri bụrụ onye na-ehicha ihe, mgbe nke ahụ gasịrị ọ na-asọba n'ime tank nke atọ. Site na ya, site na ala, mmiri ahụ ruru ebe a na-edozi ihe ndị e kere eke site na ájá ájá ájá, ebe a kpochapụrụ ya ruo 80% ma hapụ ya n'ọfịs pụrụ iche ma ọ bụ tankị. Usoro a nke mkpofu mmiri mmiri dị ọcha bụ ihe amamihe dị na ya naanị ebe e nwere nnukwu traktị nke ala.
A sị ka e kwuwe, ọ bụ naanị ma ọ dịkarịa ala mita 30 ka ụlọ ma ọ bụ isi iyi mmiri na-aṅụ ga-adị. Ọzọkwa, saịtị ntanetị nwere ọtụtụ ohere, ọ bụ ezie na ha dị n'okpuru ala. Tụkwasị na nke a, mmiri dị n'ime ala a ekwesịghị ibili karịa 3 mita.
Ụdị nhicha a dị iche na nke a nwere ike iji na ala ebe ọkwa mmiri dị elu. Ọ bụ olulu nke nwere mpaghara anọ jikọtara na ibe ya site na ọkpọkọ na-enwe ntakịrị ọchịchọ.
Na tank mbụ, mmiri mmiri na-agbanye na mmiri nke mmiri dị ọcha wee banye n'ime ogige ọzọ. N'ebe ahụ, a na-eme ka mmiri dị ọcha site na microorganisms anaerobic, ma ugbua na-akọwa ya n'ụzọ doro anya, a na-eziga ya na nke atọ - separator, sitekwa n'ebe ahụ - ruo nke anọ. N'ebe ahụ kwa, ọ na-anata ọgwụgwọ nje bacteria. Ha chọrọ ikuku ikuku na-abịa mgbe nile na-abata ebe a na ọkpọkọ nke a na-ebute dị elu nke ọkara mita. N'ihi nhazi nke nje bacteria ndị a, mmiri na-adị ọcha ruo pasent 95 ma dị mma maka ịkụ ọka, ịsa ụgbọ ala na mkpa ndị ọzọ.
Usoro a nke ọgwụgwọ mmiri ozuzo na-achọkarị n'ụlọ ndị nwe ụlọ na ndị bi na ya na-adịgide adịgide, ebe ọ bụ na nje bacteria chọrọ ka mmiri na-aga n'ihu na-aga n'ihu, na-enweghị nke ha na-anwụ. Ọ bụ ezie na nje bacteria na-adị mfe ịgbakwunye usoro ahụ site n'ụlọ mposi, ị ga-echere izu abụọ iji weghachite ọrụ zuru ezu.
O nwekwara ike ịba uru maka ịmara otú e si ewu ụlọ okpuru ulo na ụgbọala, otu esi kpochapụ mmiri dị n'ime ala, otu esi eme ka ọkụ dị maka ụlọ, otu esi eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dị ọkụ, mmiri ịsa mmiri, nleta na nbata, ụzọ esi rụọ bat, nakwa otu esi eme stovu na stovu. Dutch oven.
Echichi a site na oku eletrik na-eme ka mmiri na-ekpofu mmiri. Ọ na-eme nke a site na iji mmanye amanye ikuku nke ikuku, nke a na-eji eletrik eletrik na onye nkesa ikuku.
Ụdị nhicha ahụ nwere ike ịgụnye otu tank, ekewa n'ime mpaghara atọ, na nke tankị atọ dị iche iche, jikọtara ibe ha site na pipes.
A na-agbanye mmiri mmiri na-ekpocha mmiri na nke mbụ ahụ n'ime tankụ mmiri, nke bụ akụkụ nke abụọ. Enwere sludge aerobic, tinyere osisi na microorganisms. Na ọ dị ha mkpa inweta ikuku ọhụrụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-agbanye mmiri mmiri dị ọcha na sludge n'ime tank nke atọ, ebe, na-ebili, ọ na-enweta nhicha dị mma karị, na sludge na sludge laghachiri na-echere tank na enyemaka nke mgbapụta. Ikuku uzo bu ihe nfe nke oma maka usoro a, dika esi eme ka mmiri di ocha karia ngwa ngwa.
Na ọ bụ ezie na echichi ahụ na-ere ọkụ eletrik, ọ dị mkpa ka ọ dị netwọk eletriki, nke bụ akụkụ ụdaghachi. N'ime ọrụ nke usoro ihe a, ọ dịkwa mkpa ịnọgide na-ebi n'ụlọ nke onye si n'ụlọ.
Site na atụmatụ atụmatụ maka usoro mmiri nsị n'ọdịnihu nakwa site na ịnweta ihe niile dị mkpa, ị nwere ike ịga n'ihu na-ewu ya.
E nwere ụzọ atọ nke pụtara:
ndozi nke usoro ntanetị nke dị n'ime ụlọ;
na-etinye pipụ n'èzí n'ụlọ;
owuwu nke ngwaọrụ di ọcha.
Video: ụlọ nsị
Ngwá ọrụ nke ọhụụ na-agụnye ọkpọkọ ọkpọkọ na-ejikọta bọmbụ na ọkpọkọ ngwongwo nke dị egwu. Ọ na-ejikọkwa n'okporo ụzọ awara awara, na-ebute nsị.
Dị ka ọ dị mma, ntinye nke usoro ntanetị dị mma iji dakọtara na ụlọ ahụ, ma ọ ga-ekwe omume ịkpọkọta nhazi n'ime ụlọ na ụlọ ahụ ewuru ugbu a, karịsịa ma ọ bụrụ obere.
N'okwu a, ịkwesịrị ịgbaso ihe ndị a:
Ebe ọ bụ na nnukwu mmiri na-ekpuchi mmiri na-ekpo ọkụ, a ga-etinye ụdọ nke na-esi na ha gaa na ihe ọkụkụ na-enweghị isi.
A ghaghị ichebe ngwá ọrụ ọcha na pipeline na mkpuchi hydraulic n'ụdị siphon, nke bụ okpu awara awara na mmiri na-adịgide adịgide na ya, nke na-anaghị ekwe ka ísì si n'ime usoro mmiri ahụ banye n'ime ebe ahụ.
Akpanaka na-ejikọ ụlọ mposi na ihe ọkụkụ ekwesịghị igafe 1 m.
Usoro ụlọ ntanetị na-achọ ventilashị, bụ nke a na-ebute ihe ọkụ ahụ na ntakịrị elu n'elu ụlọ.
Ọ dị mkpa! E kwesịrị ijikọ ụlọ mposi na wiilị na-ekirikiri na ala nke ala.
Ọ bụrụ na awụnye ọkpọkọ n'ụlọ ụlọ, ọ dị ụzọ atọ iji wụnye ha:
n'enyemaka nke ịtụ nkume na mgbidi ha na-eme ka eriri na-ezo n'ime ya;
tinye ha n'ala;
na-agbanye n'elu mgbidi ya.
A na-achịkọta pipeline, na-amalite site na riser ma na-ejedebe na ngwugwu. Ihe kachasị mkpa mgbe ị na-ekesa pipụ a na-ahụ anya bụ iji guzobe ọchịchọ nke chọrọ.
Nnukwu ọkpọ ahụ ga-abụ nke dị ntakịrị. Dịka ọmụmaatụ, nwere eriri ọkpọkọ nke 50 mm, otu njedebe nke ogologo mita ya ga-adị 30 mm elu karịa nke abụọ, ya na dayameta 200 mm, nke a bụ nanị 7 mm.
Video: sewer pipe okirikiri N'ileghachi anya na mbụ, o yiri ka ọ ga-esi na-arịwanye elu n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ọ ga-akacha mma. Otú ọ dị, n'eziokwu, mmụba dị ukwuu na-eme ka mmiri kwatuo ọkpọkọ ahụ ngwa ngwa, akụkụ ndị ka njọ nke effluent adịghịkwa ejide ya ma nọrọ n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
Anyị na-atụ aro ka ị na-agụ ihe gbasara ụzọ isi mee ụlọ na-ekpo ọkụ, kpochapụ ihe nkedo, otu esi ewepụ ncha na mgbanaka, otu esi ewepu akwa si na mgbidi ahụ, na-acha ọcha site n'elu ụlọ, otu esi kpoo akwụkwọ ahụaja, iji kpooadị gypsum kpuchie mgbidi, otú ị ga-esi mee ka ụlọ ahụ dị ọcha.
Site na ntinye ụlọ nke ụlọ elu, ụlọ ntanetị amalite. N'akụkụ ala ya, a na-ejikọta ọkụ ahụ na ọkpọkọ na-agafe na ntọala ma na-eduga drain ahụ n'èzí, na n'elu ọ na-ekpuchi ya na ikuku ventila elu n'elu ụlọ.
Ọ dị mkpa! Nhọrọ kacha mma mgbe ụlọ ahụ dum nwere naanị otu ihe.
Ejiri ntinye na ntinye nke riser na usoro ndi a:
N'elu mgbidi ahụ, ebe a ga-esi nweta ihe ga-eme n'ọdịnihu, ọ dị mkpa iji dozie pensụl ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ, a na-eme mkpọtụ na mgbidi ahụ, dịtụ ma ọ bụ dị omimi karịa dayameta nke ọkụ mmiri ọkụ. Mgbe a na-agbanye ọkpọ ahụ na mgbidi n'èzí, a na-eji akara na brackets mee ihe. Ekwesịrị ịkwado ngwa ngwa n'okpuru ntọala jikọtara ọkpọkọ ahụ, ebe dị anya n'agbata ihe mkpuchi ekwesịghị igafe 4 m.
Mgbe ahụ, ọ dị mkpa ịbịkọta ihe ọkụ ahụ ma tinye ya na mgbidi iji chọpụta ma ọ dị mkpa ka akụkụ niile dị iche iche dị na akaụntụ banyere njikọ maka njikọta akụkụ nke usoro. Ọ na-ekpebikwa ebe a na-etinye ihe ntanye, ma ọ bụrụ na e nwere ntinye mpụga nke ọkụ na mgbidi. A ghaghị iburu n'uche na a gaghị etinye mgbịrịgwụ ahụ n'akụkụ mgbidi, ọdịiche dị n'etiti ha kwesịrị ịdịkarịa ala 3 cm.
Ịkwụsị njehie niile na ntinye nke ọkpọkọ, na-eji akara aka enweta riser ma jikọta ya na nkedo, ma ọ bụrụ na a na-enye ihe ntanetụ.
Na-esote, ịkwesịrị ijikọta ọkụ ahụ na ọkpọkọ nke na-ebute mmiri ahụ. E nwere ike jikọta ọnụ elu nke riser na ọkpọkọ ọkpọ, nke na-arịgo n'elu ụlọ.
Vidio: Atụmatụ ntinye nke riser
Ugbo mmiri na-eji mmiri na-ekpo ọkụ nke usoro mmiri ozuzo jikọọ na esịtidem na gburugburu ebe obibi, na-enyere aka:
zere gas na-esi ike ma na-esi ísì ụtọ nke na-etolite n'ime ụlọ ntanetị;
nọgide na-enwe nrụgide dị n'ime usoro.
Maka uru ya nile, ọ dịghị mkpa ka ịkụ ụzụ n'emeghị ihe ọ bụla dị mkpa na ụlọ ọ bụla na-enweghị ụlọ. Na obere obere ụlọ ụlọ, ebe oke mmiri mmiri dị ntakịrị, ọ ga-ekwe omume na-enweghị ngwaọrụ a. Ma n'ime ụlọ ndị buru ibu, okpukpu abụọ ma ọ bụ karịa, na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ụlọ, ndị na-akwado egwuregwu dị mkpa.
Ha na-arụ ọrụ na usoro nke ikuku nke ikuku na mbara igwe n'ime usoro ntanetị mgbe a na-atụgharị ikuku n'ime. Nke a na-enye aka site na valves nke mgbu, nke na-ahapụ ka ikuku ikuku mgbe nrụgide ya na-ada, ma gbochie gas ndị na-agbakọta n'ime usoro ahụ iji gbapụ n'èzí. Wụnye ọkpọkọ ndị na-eme mkpọmkpọ ụrọ na mpempe mmiri dị n'elu ụlọ, ebe ha, dịka iwu, na-ebili 20 cm n'elu ụlọ. Mgbe ụfọdụ, a na-etinye ventilash ahụ n'ime ụlọ ndị dị n'ime ụlọ ahụ.
Mwepụ nke mmiri ozuzo bụ usoro ọkpọkọ, nke dị n'okpuru ntọala nke ụlọ ahụ ma na-eje ozi dị ka mgbatị nke riser. Ọ bụ onye na-elekọta mmadụ n'etiti onye nchịkọta nke ụlọ na akụkụ nke ọzọ nke usoro ntanetị.
Ihe kacha sie ike na ngwaọrụ ya bụ ịga n'èzí n'okpuru ntọala ma ọ bụ site na ya iji jikọọ na pipeline.
Akụrụngwa maka mmepụta na-achọ ka pipụ nke otu dayameta dịka nke ihe ọkụkụ ahụ, nakwa ihe nkedo nke na-eme ka eriri pipeline dị na ntaneti, nke a na-eduzi ya na ntọala. Ntọhapụ mmiri
Gụkwuo banyere otu esi esi rụọ ụlọ na ebe a na-amanye elu, otu esi eme ka ọkpụkpụ mansard, ụzọ iji kpuchie ụlọ na ondulin na ígwè, otú e si eme ebe ikpuchi nke ụlọ ahụ, wuo ụdị akwụkwọ maka ntọala ma kpuchie ụlọ ala nke ụlọ ahụ.
Ngwa netwọk nke usoro mmiri ozuzo na-amalite site na ikpochapu si na ntọala ahụ gaa na ngwaọrụ nhicha, ebe ọ na-ewepụta ihe mmiri mmiri si n'ụlọ.
N'ihi na ntanetị nwere ike ịgbaso iwu ndị a:
ọ ga-abụrịrị na mmiri na-esi na ya apụta na ọ gaghị adị na oyi;
na enweghi ohere igwu olulu miri emi, a ghaghi ikpo oku ahu;
через каждые десять метров на прямых участках трубопровода и на его поворотах необходима установка ревизионных колодцев.
Ewezuga igwu olulu a na-enweghị ihe omimi, ịtọ ụda anaghị achọ mgbalị dị ukwuu:
Nke mbụ, ebe ọnụ mmiri ahụ dị njikere, na-agụnye na omimi na ọchịchọ dị mkpa maka ngwaọrụ nhicha.
N'okpuru ya, a wụsara ihe dịka 10-centimita nke ngwakọta nke ájá na ụrọ.
A na-etinye ọkpọkọ n'elu n'elu oyi akwa a.
A na-ejikwa ngwakọta a jupụta ọdịiche dị n'etiti ya na mgbidi nke ọdọ mmiri ahụ.
Ekejuru ebe a jupụtara na ala e gwupụrụ na mbụ.
A na-eweghachi ihe odide nke arụmọrụ ndị a.
A na-ejizi cesspools oge ochie enweghi ala ka ọ dị obere na obere. Kama nke ahụ, ha na-eji ngwaọrụ nchekwa na nhicha. Nke mbụ n'ime ihe ndị a bụ nnukwu ọdọ mmiri, nke a na-emechi ya, nke mere na ihe ndị dị n'ime ya adịghị abata na ala gbara ya gburugburu.
Akụkụ a nke usoro mmiri ntanetị nke dịpụrụ adịpụ kachasị mma na mpaghara ndị dị elu nke ala mmiri, nakwa dị ka ụlọ mba na ụlọ ndị dị na mba, nke a na-eleta n'oge na-adịghị anya ma site na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị mmadụ.
Ọ bụrụ na ụlọ ụlọ ahụ buru ibu, nke nwere ụdị ngwongwo na ọtụtụ ndị bi na ya mgbe niile, mgbe ahụ, ịchọrọ tankị asa ma ọ bụrụ na ị na-agwọ mmiri ma ọ bụ na a ga-eme ka ọ dị mma.
Ụdị nchịkọta mmiri na-arụ ọrụ dị nnọọ mfe: mmiri mmiri mmiri na-abanye na mmiri ma gbakọta na ya na-enweghị kọntaktị ọ bụla na ala gbara ya gburugburu. Mgbe tank ahụ jupụtara na mmiri, ọ dị mkpa iji nweta ọrụ nke ụgbọala iji kpochapụ ha.
Dị ka tankị nchekwa dị ka nnukwu ụlọ nrụpụta plastik emere, ma na-eme onwe ya site na brik, ihe mgbochi, ihe nkedo ma ọ bụ welded ọ bụla n'ime ígwè mmanya. Ụdị mmiri tankị dị iche iche dị mgbagwoju anya. Ha na-enwe akụkụ dị iche iche, nke mbụ n'ime ihe ndị siri ike nke mmiri ozuzo na-efe efe, na-eme ka ọgwụ na-agwọ ọrịa na-eme ka ọ bụrụ akụkụ nke ọzọ, ebe ọ dị ọcha site na iji usoro nzacha.
Nhọrọ nke otu ma ọ bụ ụdị ọzọ nke mmiri tank nwere ike kpebisie ike site n'ogo nke saịtị mmiri, ogo nke saịtị ahụ, yana ụlọ, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-adịgide adịgide na ebe obibi ha dị ọcha.
Maka ịmepụta ikike ikike iji:
Wụnye ihe dị n'ime ya.
Mee mgbidi brik gburugburu ya, n'elu ya na-enye otu oghere maka ọkpọkọ mmiri ozuzo. N'elu ihe mkpuchi ahụ kwesịrị ịbụ oghere ọzọ maka ọkpọkọ ụgbọala a na-amanye, nke n'oge ọ bụla ọzọ a ga-etinyechichi anya.
Kama brik, ị nwere ike iji ihe yiri mgbaaka ma ọ bụ ígwè welded.
Video: ịmepụta tankị septic Maka ịmepụta ụdị tankị septic na-eji ihe yiri mgbaaka, ihe ndị e ji ígwè mee, Eurocubes na tankị ndị ọzọ plastik.
A na-agbanye ha dịka iche, mana nhazi ha yiri nke a:
Mbụ ị ga-egwu olulu, nke n'ogologo na obosara kwesịrị ịdị ihe dị ka ọkara mita karịa ka arụnyere na ya.
Mgbe ahụ, a ga-amanye ala nke nsị ahụ ma kpuchie ájá ájá 2 cm.
Maka ihe nkwekorita na plastik, ichota ihe omuma.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dị mkpa ịmepụta tank ahụ.
Ekwesiri ijiri tankị jikọọ ya, a ga-eji otu n'ime ya mee ka mmiri na-ekpocha mmiri, mmiri dị ọcha sikwa na nke ọzọ.
Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye ihe ọcha nke mmiri site na iji ala.
Ikwesịrị ịwụnye okpu.
N'ikpeazụ, ọ dị gị mkpa ijupụta tank ahụ na ala ahụ e wepụrụ na mbụ.
Ọ bụrụ na onye na-achọghị ma ọ bụ na enwebeghị ike ịwụnye usoro mmiri ozuzo na ụlọ ya ma ọ bụ ụlọ ezumike ya, ọ nwere ohere ime ụlọ na-enweghị ya. Ha bụ ngwaọrụ kwadoro nke na-adịghị mkpa ka ejikọta ya na usoro ntanetị.
Ọ ga-aba uru maka ị gụọ banyere etu na ebe ị ga-ewu ụlọ mposi na mba ahụ, otu esi họrọ ụlọ mposi kachasị mma, yana chọpụta otú ụlọ mposi na-esi arụ ọrụ.
Ugbu a, e nwere ụdị ụlọ mposi dị iche iche, mana ndị kachasị amara n'etiti ha bụ:
Peaty, dị ka ọ dị mfe nghọta site n'aha ahụ, jiri peat pụrụ iche na ndị na-emepụta ihe maka ihe ndị na-emepụta ihe na-eme ka mmiri ghara ịkọ. Na mmiri mmiri na-eji ngwọta pụrụ iche mee ka mmezi nke ngwaahịa na-emepụta ngwa ngwa.
Na eletriki, nke kachasị oké ọnụ, na-ekewapụsị ihe mkpofu ahụ n'ime ihe ndị siri ike na mmiri mmiri, nke mbụ a na-esite na ya ma nke abụọ.
N'iburu ihe dị mgbagwoju anya nke usoro a, itinye usoro nsị na ụlọ na aka aka ha dị n'aka ike nna ukwu. Site na atụmatụ ziri ezi nke usoro ihe ga-eme n'ọdịnihu, nnweta ihe na ọchịchọ dị ukwuu iji chọpụta ihe a chọrọ, ịga nke ọma, dị ka omume na-egosi, na-abịarute mgbe niile.